Ogaden News Agency (ONA) – 800 Ayaa Laqaawiyay 8 Sanana Waan Boodboodayay Waa Hadaladii Maxbuuska Jigjiga! W/Q: Xaaji M/rashiid Aw-Macalim
800 Ayaa Laqaawiyay 8 Sanana Waan Boodboodayay Waa Hadaladii Maxbuuska Jigjiga! W/Q: Xaaji M/rashiid Aw-Macalim
Posted by Dayr	/ June 26, 2015
Guumaysiga waxaa la isku raacsanyahay inuu yahay cadaab aduunyo waxaana aad usii fahmi kara dadka shaabuuga guumaystuhu ku dhacay. Ree Ogadenya ayaa si fiican u qeexi kara hadii wax laga waydiiyo adoonsigu wax uu yahay. Bulshada Ogadenya ruux kastoo kamid ahi waa saxaafad socota oo haduu ka waramo isaga laftiisu waxa uu guumeystaha kala kulmay waxaa daalaya kii wax wareysanayay. Waxaad ka dareemaysaa wariye kasta oo shaqsi ree Ogadenya wareysta dheygag iyo dhakofaar waxaana ugu wacan- waxaa marka hore dadka dibadaha ee xog ogaalka aan ahayn saameeyay Brobogaanka waxa loogu yeedho Kililka oo ah- in Gobolku horumar ka xaqa beelay.
Wariyaasha somalida oon waxbadan kala socon xaalada dhabta ah ee Ogadenya ayaa mararka qaarkood lakulma dhibanayaal kasoo jeeda wadankaas iyagoon aad u rumaysanin Qaylo,dhaanta Taageerayaalka ONLF ay Caalamka la dhexmarayaan, oo soomaalida qaarkeed u haysato ka badbadin.
Waxaa maalmo kahor fooda isku daray waraysi xasaasi ah- Wariye Cali xaraare iyo Dulmane Maxamed Xasan. Wariyaha oo u muuqday inuu danaynayo Gobolka iyo xaqiiqada kajirta ayay ila tahay inuu si dhab ah u qaatay hadalka Dulmane M-Xasan. Wareysiga ood la socoteen balse anigu aan faallo ka bixinayo ayaa tiiraanyo ku reebay cidii dhageysatay. Dawlad waliba waxay leedahay Xabsi, balse waxaa caadi ah markii ruuxa laqabto in lamariyo dambi baadhis hadii waxa lagu eedaynayo lagu helo in markaas Maxkamadi xukunto, hadii lagu wayana lasiidaayo. Waxaa maamulka jigjiga uu la kaliyoobay ruuxii safarka ahaa ee ay soo qabteen oo 10 Sano dardaray umbaa is arki !
Waxaan rabaa bal inaan isla eegno akhristaha sideed u aragtaa in lagugu hor qaawiyo Sodogaa,Sodohdaa, Seedigaa ama Dumaashidaa? Dhaawac intee la’eg ayay maskaxdaada ku reebaysaa? in ruuxa laqaawiyaaye waa dambi wayn oo insaaniyada laga galay, si gaar ahna waa islaamnimadIi oo lagu tuntay. Cawradu waa wax private ah sidaa darteed ilmaha aad dhashay ee 10 sano jira ma’ogola inaad cawradiisa aragto adigoo dhalayna ma’ogolid inuu cawradaada arko! Ma u malayn cid kale inaad ogolaaneyso? Diinteenu ma ogola inaad is qaawiso xataa hadaad kaligaa tahay markii laga reebo waqtiga daruurada ah sida qabeyska ama xaalad kale oo muhiim ah.
Hadaan yara ifiyo Ciwaanka waxaan soo qaatay labadii weedhood ee aadka ii saameeyay oo kala ah in Odeygii Aabihii la ekaa ninka loo tiiriyo inuu xukumo dalka, ee Qaaradda Amerika iska soo qarash gareeyay isagoo islahaa bal dalkaagii booqo, waxaa loogu abaal guday in la xidho boqolaal ruuxna lagu dhex qaawiyo. Ciqaab waxaaba ugu filaa in guyaal badan la haystay oo uu danihiisii oo dhan seegay. Balaayo labaadi waxay dhacday markii Lugtii Caagga aheyd iyadana gaar loo xabisay xaalkii maxbuuskuna noqday bood,bood iyo hangoolayn!
Isku soo duuboo waxaa fajacday Umadii daawatay wareysiga Dulmane M.Xasan, waxaanse wada sugeynaa markii warbaahinta Caalamka iyo Dhibanayaalka ree Ogadenya la isaga dhex baxo siday wax udhacaan!